-Maahmaahyo saddex saddex ah iyo Maxamed “Stanza” Stanza halkan wuxuu ku soo bandhigay maahmaahyo saddex saddex ah oo uu isagu. Maahmaahyo iyo murti soomaali ah. K likes. pagekan waxaad soo dhigi kartaan maahmaahyada murtida sheekooyinka iyo wixii kale ee ku saabsan. AKHRISO Maahmaahyo Saddexleya, W/Q: Cali Cabdi Coomay “-Saddex saddex Xuduudka Somaliland Iyo Itoobiya Wixii talo iyo tusaale ah fadlan noogu soo.
Author: Teran Kajisho
Maahmaahyo – Moment Somali Proverbs
Carab iyo labadiisa daan baa isugu dhaw iyana way is qaniinaan. Quud aan jirin qoryo u guro. Qof aan waxa soo socda garan waxa joogana ma garto Doqon ha u gargaarin hana gargaarsan.
Gabadhi waa meel xun joog. Ag-joog, Ninkii xilo doonayowna Maahmaahjo agjoog. Nimaan dhul marin dhaayo malaha.
Sodcaal maa moodhar, sahayna waa lacag, saaxiibna waa kaba cad. Naagi kun nin way la sheekaysataa kawna way ka guursataa. Ninkii dhimanayaa dheg baa dheer Daleel marow maradiis geed ma daarow Qaadis iyo jiidis waa isla guryo geyn.
Biyahaan fiiqsi loo liqin, iyo hadalkaan fiirsi loo oran feerahay wax yeelaan. Ceeb looma dhinto, cara lalama qarxo, cayna looma dhaawacmo Nin lagu seexdaw ha seexan. Qalbigu laba ruux ma wada qaado. Afxumo nabad way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto.
MAAHMAAHYO SOOMAALI SADDEXLEY AH | Ismail Suge Personal Blog
Talo adigaa ku nool ee iyadu kuguma noola 3. Dab aan ku gubin kulaylkiisa ma ogid.
Dad iyo weel godanba waa la badsadaa weelka godan biyahaa ku urura Doqoneey dabkaa ba Saddex Waa la Isku Naca: Biyo gorore oo meel godan bay isugu tageen. J Dad aqoon leh ha noqoto. Ma waxaad yeeshaa, wax naftaada u fiican oo wiilkaaga u maahmaayo, mise wax naftaada u xun oo wiilkaaga u fiican. Dudun dareen ii dugsashu inis ki dartooy. Mansha allah waa maahmaahyo dhaxal gal u ah dhalinta soomaaliyded. Nin duulay dantii kaa og Barasho u yeelo geedkaad cugsan doonto.
Doqoni waxay leedahay laba iyo toban indhood, hal mid waxay ku aragtaa.
Eydin geel kolba waa ninkii ku danbeeya. Casaan qurux kama qatana. T Nin jooga oon la tirsan.
J Rag ma yaqaane. Hadalna sii dhehbaa diley hanbana sii hudhbaa dishay. Dhar kaa dheer dhaxan kaama reebo.
Sidaan kuugu lisay iigumaad hanbayn. God hadimo ha qodin, haddaad qoddana ha dheerayn, ku dhici doontaana ma ogid Dhur waa la tegis bartay ka ridistu waa ku ceeb.
Hasha naasa adag iyo weedha hadalka maxaa kulmiyey